အဝေးချစ် နဲ့ ချစ်နေရတဲ့ စုံတွဲလေးတွေရှိလား အဝေးချစ် ဆိုတာ တကယ်ပဲ နာကျင်ရတာလား လွမ်းဆွတ်ရတာလား ... အဝေးချစ် နဲ့ ချစ်နေရတဲ့စုံတွဲလေးတွေ အနီးမှာ တူတူ ချစ်ခွင့်ရတဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ သူတို့ မျှော်လင့်ထားသလို .. တကယ်ပဲ ပျော်ရွှင်ရပါ့မလား ... ခရေဖြူ ထုတ်လုပ်ရေး ရဲ့ အဝေးချစ် ဆရာမ ပုညခင် ရဲ့ အဝေးချစ် အောင်ရဲလင်း နဲ့ သက်မွန် တို့ရဲ့ အဝေးချစ် ကရော ? ချိုမြိန်ခြင်းတွေလား... လွမ်းဆွတ်ခြင်းတွေလား .. နာကျင်ခြင်းတွေလား ဆိုတာ .... သရုပ်ဆောင်များ အောင်ရဲလင်း ၊ အကယ်ဒမီ စိုးမြတ်သူဇာ ၊ အကယ်ဒမီ သက်မွန်မြင့် ၊ ထွန်းကိုကို ၊ သန္တာဗိုလ်
အဝေးချစ် နဲ့ ချစ်နေရတဲ့ စုံတွဲလေးတွေရှိလား
အဝေးချစ် ဆိုတာ တကယ်ပဲ နာကျင်ရတာလား
အဝေးချစ် နဲ့ ချစ်နေရတဲ့စုံတွဲလေးတွေ
အနီးမှာ တူတူ ချစ်ခွင့်ရတဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ
သူတို့ မျှော်လင့်ထားသလို ..
တကယ်ပဲ ပျော်ရွှင်ရပါ့မလား ...
ခရေဖြူ ထုတ်လုပ်ရေး ရဲ့ အဝေးချစ်
ဆရာမ ပုညခင် ရဲ့ အဝေးချစ်
အောင်ရဲလင်း နဲ့ သက်မွန် တို့ရဲ့ အဝေးချစ် ကရော ?
ချိုမြိန်ခြင်းတွေလား... လွမ်းဆွတ်ခြင်းတွေလား ..
နာကျင်ခြင်းတွေလား ဆိုတာ ....
အောင်ရဲလင်း ၊ အကယ်ဒမီ စိုးမြတ်သူဇာ ၊ အကယ်ဒမီ သက်မွန်မြင့် ၊ ထွန်းကိုကို ၊ သန္တာဗိုလ်
ဒါရိုက်တာ ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)